Cantilever စုံစမ်းစစ်ဆေး Cantilever စုံစမ်းစစ်ဆေး မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Soar Technology Co., Ltd ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့မှုကိုအထူးပြုနေ Cantilever စုံစမ်းစစ်ဆေးရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan။ အဓိကအားဖြင့်ဒီထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကန်ထရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီထုတ်ကုန်သစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းသင့်ကိုကူညီနိုင်ပါ။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကောင်းမွန်စွာကမ္ဘာပေါ်တွင်တွင်ရောင်းချလျက်ရှိကြ၏ ဖောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူမြင့်မားကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။
ပုံစံ - Cantilever Probe-- Bending foundry
အဆိုပါအာကာသယာဉ်စုံစမ်းစစ်ဆေးကဒ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်,အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းနှင့်စမ်းသပ်စက်အကြား interface ကိုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်,wafer test ကိုအမှန်တကယ်စမ်းသပ်လို့ရတယ်.
စုံစမ်းစစ်ဆေးအသုံးပြုမှု:၎င်းသည် probe card ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးချိတ်ဆက်ထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်.၄ င်းကိုထုတ်ကုန်များနှင့်မကောင်းသောထုတ်ကုန်များနှင့်ခွဲခြားရန်လျှပ်စစ်အချက်ပြချက်များကိုချစ်ပ်၏ pads များသို့ပို့ခြင်းဖြင့်သီးခြားစီစမ်းသပ်သည်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.probe-needles.com/my/cantilever-probe.html
အကောင်းဆုံး Cantilever စုံစမ်းစစ်ဆေး ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက် Cantilever စုံစမ်းစစ်ဆေး ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူ Cantilever စုံစမ်းစစ်ဆေး ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်အတွက်၊ Taiwan
ဖြည့်စွက်ကာ,အလွန်ခက်ခဲပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပစ္စည်းအဖြစ်,tungsten ကိုမကြာခဏအမြင့်သို့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်-သိပ်သည်းဆနှင့်မြင့်မားသော-ထိုကဲ့သို့သောသံချပ်ကာယာဉ်များအဖြစ်မာကျော applications များ,လေကြောင်းမြင့်အပူချိန်,အပူနစ်မြုပ်,နှင့်သင်္ဘောများနှင့်လေယာဉ်ပျံများအတွက်လှေငြိမ်.အဖြိုက်နက်သည်အလွန်ပါးလွှာသောအပ်ဖြစ်သည်-သိပ္ပံနည်းကျတူရိယာများအတွက်ဆန့်ကျင်ဘက်အလွိုင်း၏ချွန်လျှပ်ကူးပစ္စည်း.အဆိုပါလျှပ်ကူးပစ္စည်းတုံးအစွန်အဖျားနှင့်တစ် ဦး ချွန်အောက်ခြေရှိပါတယ်.၎င်းသည်ဒဏ်ခံနိုင်သောသတ္တုစပ်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်-လှည့်၏ဒေါင်လိုက်ဝင်ရိုးနှင့်အတူကြီးမားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းနည်းလမ်း.အရည်ပျော်သောအောက်စီဂျင်ကိုဖယ်ရှားပြီးသိသိသာသာအစားထိုးနိုင်သည်.ရေကန်တိုင်.
ဖြည့်စွက်ကာ,ရီနီယမ်-tungsten စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများတွင်အောက်ပါလက္ခဏာများလည်းရှိသည်: အရည်ပျော်မှတ်မြင့်မားပါသည် ပြင်းထန်မှု မြင့်မားသောပလပ်စတစ် မြင့်မားသောခုခံ အနိမ့်အခိုးအငွေ့ဖိအား မြင့်မားသောစီးကူးမှု ခိုင်မာတဲ့အပူစီးကူး
Prob beryllium copper ကိုအဆက်အသွယ်နည်းခြင်းသို့မဟုတ်မြင့်မားသော current အတွက်မကြာခဏအသုံးပြုသည်.အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ,၎င်း၏ခိုင်မာသောဝိသေသလက္ခဏာများအတော်လေးနိမ့်ဖြစ်ကြသည်,wear ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဒါ,အခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများထက်ပိုမြန်လိမ့်မည်.ဘီရီလီယမ်၏ကြေးနီစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းကို wafer body သို့ခွဲခြားထားသည်.အစဉ်အလာအဖြိုက်နက်ဆေးထိုးအပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည်,ဘီရီလီယမ်၏ကြေးနီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပျော့ပြောင်းမှုသည်ပိုမိုမြင့်မားပြီးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်.ယေဘူယျအားဖြင့်,ဘာရီလီယမ်၏ကြေးနီကြိုးများကို LED နှင့် LCD စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ပြီးထုတ်လုပ်ထားသည်.၎င်းသည်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထိရောက်သောကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးသောဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်.